Wax Ka Ogow Cudurada Loo Yaqaano Dilaaga Aamusan? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cudurada loo yaqaano dilaaga aamusan marka ay qofka ku dhacaan billowgooda hore malahan wax calaamad ah oo caddeyneyso in uu cudur jiro.
Cilmi baaris ay sameysay Hey’adda Caafimaadka Adduunka waxa ay ku oggaatay in cudurada loo yaqaano dilaaga aamusan sanadkii ay u dhintaan 41milyan oo ku kale nool daafaha Caalamka, taasi oo u dhiganta 70% dhimashada dadka ku nool caalamka in ay sababaan cudurada loo yaqaano dilaaga aamusan. 15milyan oo ka mid ah 41-da milyan da’dooda waxa ay u dhaxaysaa 30-69sanno.
Cudurada Loo Yaqaano Dilaaga Aamusan Waxa Ay Kale Yihiin.
Dhiig-karka ama sara u kaca cadaadiska dhiigga, Qofka marka uu oggaado in uu qabo dhiig-kar, waxaa muhiim ah uu aad u illaaliyo caafimaadkiisa.
Cudurka Macaanka waxa uu kamid yahay Cudurada loo yaqaano dilaaga aamusan, haddii aan la daaweyn waxa uu saameyn caafimaad daro u geystaa xubnaha muhiimka u ah noloshada sida Indhaha, killiyaha IWM.
Kansarka noocyadiisa kale duwan waxa ay kamid yihiin cudurada loo yaqaano dilaaga aamusan, sababtoo ah waxa uu ku fidi karaa si dhaqso ah, haddii aan la daaweyna waxa uu ku faafi karaa dhammaan jirka, taasina waxa ay halis galin kartaa nolosha qofka.
Cabista Sigaarka waa dilaa aamusan inkastoo ay dadka cabba aysan ku baraarugsaneyn qatarta aad ka u badan oo ku reebi karo sambabada.
Hurda La’aanta uu qofka isku arko waqti badan, Hurdu waxa ay noo leedahay faa’iido aad u badan,waxaana kamid ah faa’iidoyinkeeda: Waan ku nasanaa, Daalka ayaana nooga ba’o marka aan seexanno, Xasuusteenna ayey xoojisaa, Shaqada maskaxda kor ayey u qaaddaa. Haddii ay kusoo wajahdo hurda la’aan waqti badan, iska daawee sida ugu dhaqsiyaha badan, sababtoo ah hurda la’aantu waxa ay qalqal galin kartaa habsami u socodka shaqada jirka.
Cudurada Ku Dhaco Beerka sida cagaarshowga.Qofka marka uu ku dhaco cagaarshow waxaa wanaagsan in uu aad ugu taxadro caafimaadkiisa, mar walibana uu ku xirnaando xarumaha lagu daryeelo caafimaadka, sababtoo ah cagaarshowga haddii aan laga daaweyn ruuxa waxa ay keeni kartaa in uu Beerka weynaado.
Cudurada Ku Dhaco Wadnaha. Qofka qabo cudurada ku dhaco wadnaha waa in uu illaaliyo mar waliba caafimaadka wadnihiisa, sidoo kale waa in uu yareeyo qaaddashada cunnoyinka duxda ay ku badantahay.
Cudurka Neefta, neefta waxa ay kamid tahay cudurada ku dhaco neef mareenka, lagama daawoobo, laakiin haddii uusan daryeel wanaagsan helin qofka waxa ay keeni kartaa in uu qofka nooga dhinto.
Dhammaan cudurada aan kor kusoo xusanay si aan ugu taxadarno waxaa wanaagsan sannadkii labbo jeer in aan marnobaaritaan caafimaad oo dhammeystiran si aan xaaladeeda caafimaad sara ugu qaaddno.
Tags: Wax Ka Ogow Cudurada Loo Yaqaano Dilaaga Aamusan?
Next post Soo Koobidda Buugga "KALA BARO RUN IYO BEEN"
Previous post Tallaalka Maxuu U Taraa Ilmaha?